Waxyaabaha keena cilladda alopecia | Bisadaha Noti
Maria Jose Roldan | | Cudurada
Waxaan aad u jecel nahay bisadeena waxaanan dooneynaa inuu markasta ladnaado, laakiin mararka qaar dhibaatooyinku waxay soo baxaan ku dhowaad iyagoon dareensanayn, waana marka aan runtii ka taxadarayno caafimaadkiisa. Mid ka mid ah kuwa xun ee xun ayaa ah alopecia feline, taas oo ah, timo luminta xad dhaafka ah ee keeni karta bidaarta meelaha qaar ee jirkaaga.
Timo luminta xubinta taranka waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan sida infekshinka maqaarka (ringworm, dulin) ama sababo kale. Waa wax iska caadi ah in bisadu mararka qaar ay keento timo lumis iyadoo is nadiifin badan aad u badan maxaa yeelay waxay dareemeysaa cuncun xasaasiyad darteed ama dulin ku leh jaakadeeda
1 Waa maxay sababaha?
1.3 Cudurka Cushing
1.5 Qaniinyada dhoobada
1.6 Dhibaatooyinka qanjirka tayroodh
Waa maxay sababaha?
Waxaa jira waqtiyo in bisadaha xanuunka ka haya laabatooyinkooda waxay kaloo yeelan karaan qaybo aan timo lahayn oo jirkooda ah adoo jeexjeexaya adoo iskudayaya inuu dajiyo xanuunkiisa. Bisadaha walbahaarka qaba sidoo kale waxay heli karaan alopecia maxaa yeelay naftooda si aad ah ayey u xanaaneeyaan marar badan. Tani waxay calaamad u tahay walaaca oo haddii aad u malaynayso in bisaddaadu leedahay, waa inaad mar labaad xasilloonaan ka raadisaa gurigaaga.
Dhanka kale, bisadda marka si aad ah loo qurxiyo, waxay ku keeni kartaa inay matagto kubbado timo ka badan intii ay ahayd, waxayna xitaa yeelataa dheef-shiid aad u culus iyadoo liqaysa timo aad u fara badan oo ku saabsan hagaajinteeda xad-dhaafka ah.
Sidoo kale, sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin hormoon ahIn kasta oo ay dhif yihiin, haddana waxay kaloo u keeni karaan timo lumis bisadaha, xitaa haddii aysan cuncun oo aysan timahaas dibadda u bixin.
Waa lagama maarmaan in la ogaado in ay jiraan sababo keena alopecia feline, sida ringworm, oo loo gudbin karo dadka sidaa darteed, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo daaweeyo.
Sidaad u aragto, waxaa jira sababo dhowr ah oo sababi kara, sidaa darteed waxaan u arki doonnaa iyaga si gooni ah si aan u ogaanno sida loo dhaqmo. Kaliya sidan, waad dhaqso u dhaqmi kartaa haddii aad u maleyneyso in bisaddaada ay yeelan karto alopecia sabab kasta oo u baahan gargaar caafimaad sida ugu dhakhsaha badan.
Ha moogaan waa maxay sababaha ugu badan ee markaa waxaad ogaan doontaa sida loo dhaqmo haddii ay dhacdo in wax aan halkan ku soo sheegnay ay ku dhacaan bisaddaada.
Noolahaani yaryar ayaa bisadda qaniinaya cuncun badanna keenaya. Wax badan oo xoqitaan ah, waxaad ku dambayn kartaa aagag aan timo lahayn. Waa inaad xayawaanku aad u ilaalisaa, maxaa yeelay caarada ayaa sababi karta isnadaamiskaOo waxaa jira hal nooc, dhegta mange, taas oo si aad ah u faafa labadaba bisad ilaa bisad iyo bisad ilaa aadanaha.
Daaweyntu waxay ka kooban tahay gasho antiparasitics baabi'inaya caarada, iyo haddii ay dhacdo inaad isnadaab yeelato, sii daawada xayawaanka ee xididka la geliyo markaa waad tirtiri kartaa.
Nasiib darrose, bisaddu sidoo kale waxay yeelan kartaa nooc ka mid ah xasaasiyadda, iyada oo ah kuwa keena alopecia the cuntada iyo deegaanka. Midda hore waxaa u sabab ah qaadashada cuntooyinka qaarkood oo aysan si fiican u dheefshiidi karin, sida badarka oo sida caadiga ah ay ku jiraan quudin badan, taas oo keeneysa in maqaarku ku yaraado casaan yar, laakiin ku faafi kara jirka intiisa kale.
Neefsashada xasaasiyadeed ee deegaanka, sida manka ama caarada boodhka, ayaa sidoo kale sababi kara alopecia.
Daaweyntu waxay ka koobnaan doontaa ka ilaali bisadda xasaasiyaddaas taas oo keenta cuncun iyo raaxo la'aan.
Waa cilad qanjidhada oo lagu garto soo saarida hormoonnada steroid ee qanjidhada adrenal. Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan waa timo luminta qaab isku dheelitiran.
Nasiib darrose, weli daawo gaar ah looma hayo cudurkan. Daawooyinka badanaa waxaa lagu daraa isbeddelada cuntada.
Bisadu waa xayawaan aad u macquul ah, ilaa heer in diiqada, caajis ama isbeddelada ka dhaca guriga waxay sababi karaan timo daadasho. Si tan looga fogaado, xayawaanka waa in la dejiyaa, u raba sida ay mudan tahay isticmaalna alaabada sida Feliway haddii aad marayso xaalad walaac leh (sida aadista dhaqtarka xoolaha, tusaale ahaan).
Waa tan ugu badan. Boodada ayaa qaniineysa bisadda, wayna isku xoqdaa cuncunka ay leedahay awgeed. Caadi ahaan tani maahan dhibaato halis ah, laakiin haddii xayawaanku leeyahay dad badan, waxaad ku dambayn kartaa nabarro iyo miisaanka maqaarkaaga.
Daaweynteedu waa mid fudud. Waxay ka kooban tahay dhig antiparasitic - sida biibiile, qoorta, buufin - ama sii kiniin ay ku talisay dhakhtarka xoolaha inaad tirtirto. Xaaladaha daran, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in bisadda lagu maydho shaambo gaar ah, oo waliba uu ku taliyo xirfadluhu.
Dhibaatooyinka qanjirka tayroodh
Timo luminta bisadaha waxay calaamad u noqon kartaa in qanjirka 'thyroid' uusan si sax ah u shaqeynaynin. Filimku wuxuu yeelan karaa hyperthyroidism ama hypothyroidism, kuwaas oo ah cuduro sababi kara flaking iyo alopecia.
Daaweyntu waxay ka koobnaan doontaa ku siiyo hormoonno si qanjirka u soo noqdo si uu u guto shaqadiisa.
Marka hore dhakhtarka xoolaha waa inuu baaro maxaa sababa alopecia bisadaada. Waxay kuxirantahay sababta, daaweyntu way ka duwanaan doontaa, maxaa yeelay daweynta fiiq ma aha mid la mid ah daweynta ringworm, tusaale ahaan.
Haddii, tusaale ahaan, dhakhtarka xoolaha uu ka shakiyo in bisaddaadu leedahay alopecia maxaa yeelay isagu isagaa u sababa dhibaato xagga dabeecadda ah, waa inaad ka fikirtaa waxyaabaha kiciya walbahaarka kuwaas oo laga yaabo inay silcayaan oo raadinayaan daaweyn dhakhso leh. Isku day in bisaddaadu nabad kula heli karto guriga gudihiisa.
Haddii milicsiga ka dib aadan weli garanaynin sababta bisaddaadu timo u lumayso, markaa aad ayey muhiim u tahay inaad u tagto dhakhtarka xoolaha oo ku takhasusay maqaarka.
Badanaa, qalalaasaha alopecia waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa sababta kicinaysa. Waxay kuxirantahay haday ka timid boodada, dulin, walaaca ... ama dhibaato kale. Sixitaanka waxa keena sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah waa lama huraan.
Laakiin xusuusnow inaad la tashato dhakhtarka xoolaha ee ku takhasusay maqaarka maqaarku waa mid aad muhiim u ah maxaa yeelay isagu wuxuu noqon doonaa kan ugu fiican ee kaa caawin doona inaad ogaato sababaha waxa ku dhacaya dhakhtarkaaga. Haddii ay tahay walaac ama dhibaato shucuur, sidoo kale waa fikrad fiican inaad u tagto khabiir ku takhasusay dabeecadda xayawaanka si aad u awoodo inaad garato waxa dhacaya kuna bilaw hababka sixida sida ugu dhakhsaha badan.
Sidaan aragnay, alopecia feline waxay astaan ​​u noqon kartaa in bisadu si fiican u dareemayn. Haddii ay dhacdo inaad ka shakiso in wax ka khaldan yihiin saaxiibkaa, ha ka waaban inaad u qaadatid dhakhtarka xoolaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cudurada » Sababaha loo yaqaan 'feline alopecia'
Waad salaaman tahay, bisadaydu waxay leedahay alopecia laakiin ma hubo taas oo ah cilmiga saxda ah, sidaa darteed waan aqrin karaa sababtoo ah caarada ama xasaasiyadda si aan u arko inay i caawin karaan:
Waxay ku haysaa addimada dambe ee jirka maqaarkiisa guduudan oo bararsan oo aad u cuncun laakiin aad iyo aad ayey timaheeda u jiideysaa oo ay u dhaaftaa liiqyada iyo leefleeca mararka qaarna waxaan arkaa iyada oo jiifta oo jiifta oo si lama filaan ah ayey u booddaa, u orodaa, u wareegtaa, lugaheeda u ruxdaa, waana ku faaftaa lugaha oo dhan, si aan u hadlo, waan cararay waana waalan tahay inaan sidan ku arko
Waxaan kugula talinayaa inaad u kaxeyso dhakhtarka xoolaha. Way iska cadahay inuu ku jiro waqti aad u xun.
Kaliya dhakhtarka xoolaha ayaa awoodi doona inuu kuu sheego waxa uu haysto iyo sida loo daaweeyo.
Salaan, iyo dhiirigelin.
Maqaalkaagu waa mid aan dhammaystirnayn oo leh khaladaad aad u culus. Feline hypothyroidism ma jiro iyo dhanka kale, haddii uu yahay xayawaan hyperthyroid, laguma daweeyo hoormoon si qanjidhada mar kale u shaqeyso, maadaama dhibaatadu tahay inay si xad dhaaf ah u shaqeyso. Talo ka hel khabiir takhasus leh.
Sidee dib loogu soo celiyaa kalsoonida bisad?